एकाएक कसरी आयो महाभियोग प्रस्ताव? - Khabarpur | Most Updated Nepali Online Portal
एकाएक कसरी आयो महाभियोग प्रस्ताव?
काठमाडौंः गत कात्तिक पहिलो सातादेखि न्यायालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसियसनले आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग राख्दै आन्दोलन थाल्दा जबरा टसमस भएनन्। बरु उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियामार्फत् नियुक्ति भएको र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत् विकल्प खुल्ला रहने बताइरहे।
त्यसपछि बारले संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो। एमालेले भने बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा संसद विघटनविरुद्ध परमादेश दिने पाँच जना न्यायाधीशविरुद्ध आउन भन्यो। तर, दलहरुले यसबारे थप छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताए। यो विषय केही समय मत्थर बन्यो। बारले थप आन्दोलन अघि बढाए पनि सो आन्दोलन निर्णायक बन्न सकेन।
एमसीसीको विषय चर्कोरुपमा उठिरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याए। सांसद रंगमति शाहीले आन्तरिक तयारीबाट महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताइन्। ‘उहाँमाथि प्रश्न उठेपछि हामीले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका हौं। दुई तीन दिनअघि देखि नै महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको थियो,' उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्।
सांसद अभिषेकप्रताप शाहले महाभियोग प्रस्तावको ड्राफ्ट आजमात्रै तयार भएको बताए। ‘महाभियोग प्रस्ताव आजै ड्राफ्ट भएर तयार भएको हो। खबर आएपछि मसहितका सांसदज्युहरुले आजै हस्ताक्षर गरेका थियौं,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।
एक सांसदले जबरामाथि योजनाबद्ध तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको बताए। उनले भने, ‘केपी शर्मा ओलीले 'साइलेन्ट गेम' खेलिरहेका थिए। देउवाले त्यसविरुद्ध कडा जवाफ फर्काएका हुन्। चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र ओलीले एमसीसी पास गर्न गठबन्धन टुटाउन गरेको प्रस्ताव शंकास्पद थियो। देउवालाई ओलीले एमसीसी पास गर्न सघाउँछु भने पनि अन्त्यमा गर्नुहुन्नथ्यो,' ती सांसदले भने, ‘ओलीले बरु गठबन्धन तोडाएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रधानमन्त्रीको सपथ खानुहुन्थ्यो।'
अवैधानिक भन्दै एमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपालसहितका सांसदहरुविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको फागुन २ गतेका लागि राखिएको थियो। प्रधानन्याधीशले जबराले उक्त पेशीलाई आजका लागि सारेका थिए। 'आज माधव नेपाल पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुन्थ्यो। स्वतः यो सरकार अल्पमतमा जान्थ्यो। संविधानकोफ ७६ (२) अनुसार ओली राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर सपथ लिएर प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहुन्थ्यो,' ती सांसदले भने।
ती सांसदका अनुसार बाबुराम भट्टराईलाई उचालेर जसपा फुटाउने तयारी पनि गरिएको छ। ‘महन्थ ठाकुर र बाबुराम पक्ष मिलाएर ओलीजीको बहुमत पुर्‍याइदिने। त्यसपछि एमसीसी पनि पास हुन्छ। यो ओलीजीको रणनीतिक तयारी थियो। देउवाले कडा जवाफ दिए,’ उनले भने।